မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာချုပ်ကိုခိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်မွေးသမိခင်ကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Mandalay Gazette » မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာချုပ်ကိုခိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်မွေးသမိခင်ကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း	132
Posted by pwint pwint on Jul 27, 2012 in Mandalay Gazette | 132 comments
မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာချုပ်ကိုခိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်မွေးသမိခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားကြောင်း ကြားသိရတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။ (မန်ဘာများ ကျေးဇူးပြုပြီး like မလုပ်ပဲ မှတ်ချက်ရေးပေးကြပါ)
About pwint pwint
pwint pwint has written 1 post in this blog.
View all posts by pwint pwint →	Blog
MaMa says: သဂျီးနဲ့ သဂျီးရဲ့ ဖခင်ကြီး စပ်တဲ့ ကဗျာထဲက ရှား၏ ရှား၏ ဆိုတာလေး စိတ်ထဲစွဲနေတယ်။
ရှိတဲ့တန်ဖိုးကို မရှိတဲ့အချိန်မှာမှ ပိုသိရတာလေ။
TTNU says: ကိုခိုင်ရေ..
May I offer my sympathies!
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ဦးခိုင်…
Comments By Postအတု - Munetez - မောင် ပေ``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - Ma Ma - padonmarသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Munetez - Ma Maအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - Ma Ma - အရီးခင်လတ်Comment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - Ma Ma - အလင်း ဆက်ရွာသူ/သားများ အတွက် - Munetez - Munetezနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Munetez - Munetezမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - black chawသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Ma Ma - အရီးခင်လတ်အဟံ ပထမံ - padonmar - natureမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - padonmar - အလင်း ဆက်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - Munetez - kaiရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - kai - garudaသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kai - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - အလင်း ဆက် -etone၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Ko chogyi - Mr. MarGaဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67420 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66832 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59081 Kyats )MaMa (57941 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...